Ebe Ndekọ Ihe Nketa & Akụkọ - IntoKildare
O doro anya na Kildare bụ isi ihe dị na East Ancient East. Obodo na obodo niile juputara na saịtị nketa, site na ihe ncheta dị mkpa nke Ndị Kraịst oge mbụ ruo na ahụmịhe ndị ọbịa nke na -akụzi akụkọ ihe mere eme n'ụzọ na -atọ ụtọ.
Enwere ọtụtụ ihe ị ga -amụta site na Strongbow ruo St. Brigid ruo Ernest Shackleton na ọbụna Arthur Guinness bụ naanị ole na ole n'ime ogologo aha ụlọ ọrụ Kildare nke ndị ama ama ama ama gara aga bụ ndị na -agbakọta inye Co. Kildare ngwakọta akụkọ ihe mere eme na ihe nketa. Banye n'ime ihe gara aga nke County Kildare ma gbasaa ihe ọmụma gị n'ọtụtụ ije, ụzọ na ebe nlegharị anya raara nye ndị bi n'oge gara aga.
Community Kwado Mpaghara Cafés okirikiri Nwee ezumike ezinụlọ Useslọ & Ubi Na-eje ije & Hiking Nature & Anụ ọhịa Ịgba ígwè Golf Na Mmiri Ụzọ ụkwụ Ihe Nwere Ike Ime Ihe Zoro Ezo Bọchị mmiri ozuzo Ochie Anyanwụ nke Ireland
Jiri ụgbọ mmiri dị jụụ gafere obodo Kildare na ụgbọ mmiri ọdịnala ma chọpụta akụkọ banyere ụzọ mmiri.
Otu n'ime ebe nlegharị anya ndị njem nlegharị anya kachasị dị na Co. Kildare na-eme ememme ịtụnanya na ịma mma nke agwaetiti Irish na anụ ọhịa ha.
Ihe dị mkpa maka onye na-anụ ọkụ ụgbọ ala na onye ọkwọ ụgbọ ala kwa ụbọchị, Gordon Bennett Route ga-akpọrọ gị njem njem akụkọ ihe mere eme gafere ọmarịcha obodo na obodo nta nke Kildare
Atụrụ Sheepdogs Na-arụ Ọrụ Irish
Nweta ezigbo ọdịdị nke obodo Irish na -eju anya na anwansi nke nkịta na -ewu ewu na -arụ ọrụ.
Nyochaa ebe obibi ndị mọnk oge ochie nke County Kildare gburugburu mkpọmkpọ ebe, ụfọdụ n'ime ụlọ elu Ireland kachasị echekwa, obe dị elu na akụkọ na-adọrọ mmasị nke akụkọ ntolite na akụkọ ifo.
Kildare Town Heritage Center na-akọ akụkọ banyere otu n'ime obodo ndị kacha ochie na Ireland site na ngosipụta mgbasa ozi na-akpali akpali.
Gaa otu obodo kacha ochie na Ireland nke gụnyere St Brigid's Monastic Site, Norman Castle, Abbeys nke ochie, Ireland nke mbụ Turf na ndị ọzọ.
Ahụmịhe Ezigbo Ahụhụ na-ebugharị gị oge na njem mmụọ na nke anwansi n'otu n'ime obodo ndị kacha ochie na Ireland.
Ụlọ nke Leixlip
Centurylọ nke Norman nke narị afọ nke iri abụọ nwere ọtụtụ ihe akụkọ ihe mere eme na-atọ ụtọ.
Ihe nketa na akụkọ ihe mere emeCafes